Parhelio: ihe ọ bụ, njirimara na mbido | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n’ime ihe ịtụnanya kachasị ịtụgharị ikuku ga - abụ parhelion. Ọ bụ ihe ikuku nke anyanwụ kpatara, n'agbanyeghị na enwere ike iwere ya dị ka ihe mmalite nke mbara igwe. Ọ na-apụtakarị na ọnọdụ ụfọdụ gburugburu ebe obibi pụrụ iche na obere oge.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe parhelion bụ, etu esi akpụ ya yana mmetụta ọ nwere.
1 Gịnị bụ parhelion
2 Kedu mgbe parhelion na-apụta?
Gịnị bụ parhelion
Obu udiri ihe omuma nke ikuku nke anaputara anwu. Ha bụ obere obere ọkụ abụọ na-etolite n'akụkụ abụọ nke anyanwụ mgbe e nwere ụdị igwe ojii. Typesdị igwe ojii ndị dị mkpa maka parhelion ahụ bụ nke ụdị cirrus ahụ. Igwe ojii ndị a nwere ọdịdị yiri filament na ụfọdụ n’ime ha yiri flakes owu. Ka ụdị ihe ikuku a wee mee, ụdị igwe ojii a gha adị ebe ọ bụ na ha nwere kristal akpụrụ na-arụ ọrụ dị ka obere prisms. Obere kristal a na-eme ka anwụ ghara ịcha. Nke a pụtara na ha ga-atụgharị akụkụ nke ụcha anyanwụ gaa ebe ọzọ na-akpụ parhelion.
Ọnọdụ gburugburu ebe obibi ndị a na-adịkarị obere na ụfọdụ mpaghara ụwa. Nwere ike ịsị na ihe ịtụnanya a dị ka ịhụ anyanwụ n'azụ igwe ojii mana ọ na-esighi ike karịa ezigbo anwụ. Ọ bụghị mgbe niile na ihe a na-eme pụtara na a na-ahụ parhelios abụọ ahụ. Oge ụfọdụ, a na-enwe naanị igwe ojii cirrus n'akụkụ otu anyanwụ ma ọ bụ naanị parhelion na-etolite. Ha bu karia isi ihe na-egbuke egbuke nke ikuku haeropu gbara anyanwụ gburugburu. Ọ dị obere na a ga-ahụ halo n'ozuzu ya.
Dika aturu anya, obu ihe omuma nke ikuku nke na adighi adi ka ya. Mgbe ụfọdụ parhelion na-apụta dị ka ntụpọ gbara gburugburu. Typesdị n'ụdị ndị a anwụ na-egosi na-anaghị enwu enwu. N'aka nke ozo, n'oge ndi ozo anyi nwere ike ichota uzo ozo di ogologo ma obu o gha acha na agba nke egwurugwu. Naanị oge ụfọdụ ị nwere ike ịhụ ụfọdụ iberibe mpempe pere mpe karịa egwurugwu. M ga-emegharị iberibe ndị a na egwurugwu ebe ọ bụ na parhelion na-apụta mgbe niile n'akụkụ anyanwụ, mgbe egwurugwu na-egosiputa na akuku nke igwe n’iru anyanwu.
Kedu mgbe parhelion na-apụta?
Ruo oge mgbe ihe ọ bụla amaghị banyere ikuku a, ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime ya. Agbanyeghị, ozugbo anyị matara ịdị adị nke parhelion, ọ bụ mgbe anyị malitere ị toa ntị na ihe omume a. Enwere ike ịhụ ya karịa oge ọ na-anọ. A na-ahụkarị ya n'anyasị ma ọ bụ n'ụtụtụ mgbe anyanwụ dị n'okpuru ihu igwe.
Parhelion na-apụtakarị n'echiche nke ogo 22 site na anyanwụ, n'ihi nkuku nke eji mee ka ìhè ọkụ dị. Nwere ike ịchọta nke a. Eluigwe ebe a na-eme ihe ndị a: ihe mbụ bụ itinye ogwe aka gbatịrị agbatị na imeghe aka. Mgbe anwụ na-ekpuchi aka anyị nwere ike ịhụ na parhelion kwesịrị ịbụ ebe ebe mkpịsị aka nta na-egosi. Enwere ike ịsị na anyị ji nkwụ aka anyị atụ eluigwe. Ọ bụrụ na enwere igwe ojii cirrus na akụkụ ahụ, ọ ga-ekwe omume na parhelion nwere ike ịmalite. Enwere ike ịchọta ya n'aka nri na aka ekpe nke anyanwụ ma ọ bụ na abụọ.
Okwu parhelio sitere na Greek para-Helios. Enwere ike ịkọwa ya dịka nke anyanwụ. Ọ bụ ezie na ọ na-adịkarị obere, n'oge ụfọdụ ị nwekwara ike ịchọta ntiwapụ nke ọnwa. Nsonaazụ bụ otu na ụzọ iji jide ya otu. Nsogbu dị na nke a bụ na enwere ike ịhụ ya mgbe enwere ọnwa zuru oke na igwe ojii cirrus ga-anọrịrị iji nwee ike iwepụ obere ọkụ site na ọnwa.
Ọ bụ ezie na ọ dịchaghị ogologo, ihe ịtụnanya a dị ka edepụtara kemgbe oge ochie. Ihe atụ nke a bụ na a kpọrọ ya aha n'akwụkwọ mbụ nke La República. N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ ndị edemede dị iche iche na-eme mkparịta ụka nkà ihe ọmụma. Na mkparịta ụka a, ị ga - ahụ etu otu n'ime ihe odide ahụ jụrụ banyere ihe gbasara ikuku dị na obodo Rome. Ihe ngosi a ka ana akpo Parhelio ma o na arutu aka na ihe ngosi nke eji hu “anwu abuo”.
Taa anyị maara na nke a abụghị eziokwu kemgbe ha bụ kristal akpụrụ akpụ nke na-ahụ maka ịpụgharị ìhè anyanwụ.
Onwere otutu ndi mmadu amaghi ihe kpatara otutu ihe a n’oge udu mmiri. Ọ bụghị ihe ijuanya na na etiti oge oyi, anyị nwere ike ịdebanye ogo nke -20 ogo n'ọtụtụ akụkụ ụwa dịka ugwu United States. N’ebe ndị a enwere ọnọdụ oyi na oke ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke zuru oke iji kwalite ọgbọ nke ụdị ihe ịtụnanya a. Nhazi nke parhelion chọrọ ka e guzobe kristal ice na ígwé ojii cirrus.
Agbanyeghị, halos enweghị ihe jikọrọ ya na egwurugwu, dị ka anyị kwurula na mbụ. Ha na-egosiputa mgbe niile n’akụkụ anyanwụ, ebe egwurugwu na-egosi n’akụkụ nke ọzọ.
Mmetụta na mmetụta
Kedu ihe ọhụụ a na-egosi na mbara igwe. Ọ bụ ihe anyị na-ajụ onwe anyị ọtụtụ. Eziokwu ahụ bụ na parhelion na-egosi n'etiti mbara igwe na-atụ anya mgbanwe mgbanwe ihu igwe nwere ike ime ka ihu igwe na-eru nso. Na ọ bụ na ọ bụrụ na anyị na-ahụ a parhelion ọ ga-ekwe omume na na-erute n'oké ifufe nke ga-ewepụta mmiri ozuzo dị nwa oge. Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo nọ na mpaghara ụwa ebe a na-ahụ ụdị ihe a ọtụtụ oge bụ ndị na-ewere parhelion dị ka ihe ịrịba ama nke mbata nke ihu igwe na-adịghị mma. Igwe ojii cirrus n'ọtụtụ ebe na-etolite naanị ụbọchị tupu ọdịdị nke oké ifufe.
Oge ndị ọzọ, mgbe halo nwere ọdịdị oval ọzọ, enwere ike ibu amụma na ihu igwe ga-akawanye njọ n'oge 12-24 awa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere parhelion na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Nnukwu ụlọ